Kooxdayada naqshadaynta xirfadlayaasha ah waxay ku siin karaan naqshadda LOGO, bandhiga astaanta gaarka ah, muujinta saamaynta calaamadda, iyo saamaynta wax-soo-saarka alaabta 3D. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale habeyn karnaa baakadaha astaantaada waxaanan habeyn karnaa kaadhka suuq-geynta ee shirkaddaada.
Adeegga Muuqaalka Wax-soo-saarka
Inta lagu jiro habka wax soo saarka ee dalbashadaada, waaxdayada adeegga iibka ka dib waxay ilaalin doontaa xidhiidhka buuxa ee adiga wakhti kasta, oo ay ku jiraan horumarka wax soo saarka ee dalbashada iyo soosaarka dalbashada.Adeegga aragga ayaa si hufan ula shaqayn kara ficilladaada suuqgeyneed.
Adeegga Caymiska Gaadiidka
Waxaan nahay xubin qandaraas leh oo ka kooban shirkado badan oo caalami ah sida FedEx, DHL, UPS iyo wixii la mid ah.Waxaan sidoo kale nahay qaybta VIP ee shirkado badan oo maraakiib ah.Marka aad dalbato bulk, waxaanu ku siin doonaa ilaalin dheeraad ah oo caymiska gaadiidka ah.
Xaqiijinta Goobta & Saamaynta Alaabta
Waxaan ku taageernay inaad u soo dirto wakaalad dhinac saddexaad warshadeena si loo xaqiijiyo goobta.Oo ay ku jiraan xaqiijinta deegaanka wax soo saarka warshadda iyo kormeerka tayada ee dalabaadka dufcadda.Marka tayada alaabooyinka ku jira nidaamku ay la kulmaan heerarkaaga, waxaanu bixin doonaa dalabka.